I-English Bull Terrier: Yazi izici nokunakekelwa kwalolu hlobo | Izinja Umhlaba
ULurdes Sarmiento | | Izinja ezijwayelekile
Uma kukhona okufanele ukwazi ngalolu daba, yilokho inokuthambekela okuthile kokulumaNgakho-ke, kubalulekile ukuthi abe namathoyizi kwazise ungumdlwane, ngoba lokhu kuzomkhulula emandleni amaningi futhi kukusize ungabhubhisi izinto ezisendlini yakho.
Njengazo zonke izinhlanga, i- ukuqeqeshwa kuyadingeka ukukuqinisekisa ngemikhuba emihle nokuthi ulalela imiyalo. I-English Bull Terrier yinja ehambela imiyalo eyisisekelo enikezwe okokuqala, ngokuhamba kwesikhathi izovumelana naleyo eyinkimbinkimbi ngokwengeziwe.
2 Isimo se-English Bull Terrier
Lolu hlobo luvame ukuba nesifiso, okungukuthi uma umnika ithuba uzodla konke akwazi, ngakho-ke kufanele unake izinkinga zokukhuluphala ezingakuhudulela kwezinye izifo ezibucayi kakhulu empilweni yakho. Ukudla okunomsoco omuhle kuyathandeka.
Ungafaki izindlela zokujezisa, ngoba lolu hlobo ngokwemvelo aluhambisani nalezi zinhloboUze uzibeke engcupheni yokusebenzisa ulaka oluthile. Ngaphezu kwalokho, ukuhlangana kwalolu hlobo kufanele kwenziwe kusuka kumdlwane ukuqinisekisa ukuxhumana okuhle nomndeni nezinye izilwane, ngaleyo ndlela kuncishiswe ubungozi bezingqinamba ezingaba khona.
Lesi sibonelo ngaphakathi komlando waso sinesizinda esibuhlungu futhi sivamile kuzo zonke izinhlobo zeBull ezidabukisayo izinja ziyalwa, umsebenzi olimazayo kulezi zilwane.
Ngokuvamile, imayelana uhlobo oluthile oluqinile nolunemisiphaIkhanda lalo lihlukile ngoba linokuma okusaqanda okuthi kanye nezindlebe zalo ezingunxantathu kulinike ukubukeka okuthile.
Ikhala lakhe limnyama, umhlathi unamandla amakhulu, amehlo amnyama akwazi ukuthola umbala onsundu, ngawo ukubukeka okuqinisekile nokuqinile. Mayelana nomsila wayo, wethula ngokufana nazo zonke izinja zeBull, zibanzi kakhulu futhi zincane ekugcineni.
Uma sikhuluma ngejazi layo, liyabukhali futhi liyacwebezela ngokubukeka, imvamisa limhlophe, kunezinhlobo ezithile ezinokuhlukahluka kusuka amabala ansundu, ama-brindle noma amnyama.
Isimo se-English Bull Terrier
Uma lolu hlobo luqeqeshwe kahle luyoba inja ezolile nabantu, kusukela Uthembekile futhi unamathele kakhulu enhlanganweni yomndeniFuthi banesifiso sokuzivikela esiyingqayizivele ngakho-ke isibindi sabo siyaziswa, kepha abanolaka nhlobo.
Futhi ukuhlangana nabantu ngoba banamandla emvelweni, Impendulo yabo ekunyakazeni okungazelelwe noma okungalindelekile ayinakunakwa, hhayi ngobubi. Kepha uma kunjalo uma enezingane, unganaki futhi ugade ngaso sonke isikhathi.
Futhi, banenkani naphezu kobuhlakani babo obukhulu kanye nekhono lokufunda, kepha kufanele ucabange ukuthi ukuqeqeshwa kwabo kungaba yinkimbinkimbi kancane. Bajwayele ukuphazamiseka kalula, badinga futhi badinga ukubekezela nokuziphatha okuningi.
Ngakolunye uhlangothi, akuzona izilwane ezithanda ukuba wedwa. Banamathela enhlanganweni yomndeni ngakho-ke bafuna inkampani eningi.
Uma ehlangene kahle, uzoba yinja elinganiselayo nenothando. Uthembekile futhi unamathele emndenini, uyayithanda inkampani nokuthi baphezu kwakhe ngaso sonke isikhathi.
Unesifiso esihle sokuzivikela ngokweqile kodwa hhayi ngaso sonke isikhathi. Uma kwenzeka uzithola udlala nezingane, makabe ngaphansi kweso elibukhali aze aziphathe kahle.
Kuyimboni enhle kakhulu. I-English Bull Terrier isilwane esithandekayo semindeni enezingane. Endabeni yobuhlobo nezinye izinja, uma efundiswe kahle uzofunda ngaphandle kwezinkinga ukusebenzisana, yize kuyindawo enkulu.
Yiba nomkhuba wokuxubha izinwele zakhe njalo. Beka izingubo ezifudumele kuyo ngoba unengubo emfushane kakhulu isengozini yokushisa okuphansi.
Ngoba isebenza ngokwedlulele, kufanele uyijwayeze ukuhamba, imidlalo kanye nemidlalo ye-canine engadingi kakhulu, ngoba ingaholela ezinkingeni zezempilo. Buza uchwepheshe mayelana nokudla okudingekayo, ngoba Uyinja eminzi kakhulu futhi angaba nezinkinga zokukhuluphala.
Vele, kuyadingeka ukuthi ucabangele ukuthi ukudla kudla ngokukhethekile kohlobo kanye nekhwalithi enhle, ngoba ukudla okunomsoco kuyanquma ukukugcina uphilile futhi uphilile. Lolu hlobo lwenja njengoba zikhula ziba ntekenteke ngokwengeziwe, ziveze amacala ezinkinga zokuphefumula.
Kuleso simo, ukudla kuzokwehluka ngokuya ngezimo zakho zomzimba. Amanzi kubalulekile ukuwagcina enamanzi, ngoba iBull Terrier ngokuba matasa kakhulu ihlushwa ukushisa njalo.
Esinye isici esibalulekile ukuvivinya umzimba okunempilo nokulinganisela, ngoba udinga ukudlala amahora ambalwa ngosuku ngendlela efanayo nezingane ezidlala ngayo sizokugwema ukukhuluphala ngokweqile noma i-atrophy ehlangene.
Mayelana nokuhlanzwa nokugeza, lolu hlobo lukhipha izinwele zalo cishe kabili ngonyaka, ngakho-ke njengoba sishilo ekuqaleni, ukuxubha kahle kunomthelela empilweni yejazi.
Ngokuqondene nendawo yokugezela, kufanele ihlanzwe ngezinsipho kanye nama-gel ayo ahambisanayo ukuze kungakhiqizi ukungezwani komzimba noma ukucasulwa. Bheka izindlebe nezindlebe zakhe ukuzomisa kahlenjengoba ungathola ukutheleleka endlebeni kusuka kumswakama.
Izinja ezibhekwa njenge-English bulla terriers zithambekele ezifweni ezithile njengokungezwa, ukuxegiswa kwamadolo, ukungezwani komzimba nezinkinga zenhliziyo. Futhi kungaba sengozini enkulu yokulunywa yizinambuzane, ukubaluleka kokuvakashela kudokotela wezilwane kuyadingeka ukuze unikeze impilo enhle.
Kukhona ucwaningo oluchaza ukuthi iminyaka yokuphila yalolu hlobo iphakathi kweminyaka eyi-9 nengu-10. Yonke imidlwane kumele ihlolwe ukugwema ububi obufana nokungezwa.
Ukulunywa yizinambuzane namazeze kungakunika ukungezwani komzimba nomzimba ngisho ne-dermatitis ebukhali. Ukugwema ububi obunjalo, gwema ukuxhumana nalezi zinambuzane uma kungenzeka futhi ulawule ukudla kwazo okususelwa ezinhlanzini, ezingenayo inkukhu namabele.
Unenkambiso ephoqelelayo yokujaha umsila wakhe, ngakho-ke kufanele uqaphele uma kungenzeka ulimale.
Njengazo zonke izinhlobo zeBull, i-English Bull Terrier yinto ekhethekile, amandla abo nomsebenzi kubenza babe nomona futhi njengabaqaphi bomndeni Benza izinja ezifanele ukuba nazo ekhaya.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Inkunzi yesiNgisi terrier